CBK Pressure pesin, ane nhamba zvakagadzirwa patents, zvigadzirwa nevakawanda zvitupa, akadai ETL.CE ... kumanikidzwa Our pesin vari aivigirwa kunyika dzinopfuura 20 vakapoteredza world.The huru misika vari Europe, America uye kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva Asia.We dzidzira kweShanduro mhuri mukuru dzvinyiriro washer.We vanoedza kuita zvakanakisisa ose product.Choose wedu CBK kumanikidzwa pesin ndiko zvaunogona bheji.
Ningbo Kelier Electric Technology Co., Ltd. ari nyanzvi kambani kusanganisa R & D, mukugadzira kumusika rokuchenesa michina. The kambani zvichatevera kutora zvinodiwa mumusika uye vatengi sezvo basa rayo, inoomerera pragmatic uye vakangwara mafungiro, uye anoita mberi-achitarisa zvisarudzo uye anotora midzi zvemichina kutsvaka kupa vatengi pamwe More ukoshi. Kubvira pakagadzwa, kambani kwakaramba hwakavandudzika uye kubudirira rakadzikama kukura kuburikidza kuzvicheka-kuvandudzwa, Kubudirira, uye kwakaramba akahwina nyasha zhinji kunoshamisa vatengi.
Isu tazvigadzira kuti kubatsira you.There nzira dzakawanda kuonana you.You anogona anodonha isu pamutsetse nguva dzose. Tipei kufona kana kutumira ane email.choose chii chakakunakira zvikuru.
HUAYUAN Village, JIANGSHAN Town, YINZHOU, Ningbo, CHINA
Car Washer High Pressure Washer , Electric High Pressure Washer , High Pressure Washer ,